बिहानको खानेकुरामा के खाने के नखाने ?
ब्रेकफस्ट के कस्ता खानेकुरा खानुपर्छ भनेर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । ब्रेकफास्टमा लिइने खानेकुरा गलत पर्दा स्वास्थ्यलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ । खाजामा बिस्कुट, कुकिजको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने आजैबाट छोडिहाल्नुस् ।
यसको प्रयोगले फ्याट बढाउनुका साथै पाचन प्रक्रियामा पनि असर पुर्‍याउँछ । बरु विकल्पमा फ्याट फ्री अन्डा, चनालगायतको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो खाजाले तौलसमेत सन्तुलनमा राख्छ ।
आज कहाँ कहाँ थपिए संक्रमित ?
सोमवार, असार ८, २०७७ सेतोखरी
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै पाल्पामा ९० जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्